पहिलाे पटक शारिरिक सम्पर्क पछि युवतीहरु किन रुन्छन्? यस्तो छ कारण ! (भिडियाे सहित) – News452Online
पहिलाे पटक शारिरिक सम्पर्क पछि युवतीहरु किन रुन्छन्? यस्तो छ कारण ! (भिडियाे सहित)
Posted byadmin	 March 19, 2021 Leaveacomment on पहिलाे पटक शारिरिक सम्पर्क पछि युवतीहरु किन रुन्छन्? यस्तो छ कारण ! (भिडियाे सहित)
शा-रीरिक सु-खभो’ग दुई व्यक्तिको बीचको स-म्बन्ध गाढा र प्रेम वृद्धि गर्न एक माध्यम हो । यसले सम्बन्धको घनिष्टता बढाउँछ र दुबै साझेदारहरूले खुशी र आ-नन्द पाउँछन् । तर धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’गपछि रुन थाल्छन् ।
यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो । पुजाले आर्को प्रेमिका छ भन्दा आकाशले खाए य’स्तो कसम, झ’गडा पर्नुको का’रण यसरी खुलाए (हेर्नुस् भिडियो)
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ भिडियो, काठमाडौं / नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागी आफूहरु एकसाथ रहेको बताएका छन् ।दर्शकले त तपाइहरुको जोडीलाई धेरै मन पराए अनि वास्तविक जीवनमै हेर्न चाहेका छ्न नी भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा पूजाले भनिन्–”यो दर्शकको चाहना हो ।
यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौ । हामी, दर्शकको मायाकै कारण एकसाथ काम गरिरहेका छौ । भोलीको कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र ।” नायिका पूजा शर्माले भनिन हामी राम्रो साथी होउ तर आफूहरु बिहैको सोचमा भने आइनसकेको बताइन् ।
चलचित्र ‘रामकहानी’मा एकसाथ काम गरेपछि पूजा र आकाश नजिक भएका थिए,दर्शक यो जोडी वस्तविक जिवनकै जोडी होस भन्ने चाहन्छन ।
तर धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’गपछि रुन थाल्छन् । यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो ।
पुजाले आर्को प्रेमिका छ भन्दा आकाशले खाए य’स्तो कसम, झ’गडा पर्नुको का’रण यसरी खुलाए (हेर्नुस् भिडियो) यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ भिडियो, काठमाडौं / नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् ।
****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागी आफूहरु एकसाथ रहेको बताएका छन् । दर्शकले त तपाइहरुको जोडीलाई धेरै मन पराए अनि वास्तविक जीवनमै हेर्न चाहेका छ्न नी भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा पूजाले भनिन्–”यो दर्शकको चाहना हो ।
चलचित्र ‘रामकहानी’मा एकसाथ काम गरेपछि पूजा र आकाश नजिक भएका थिए,दर्शक यो जोडी वस्तविक जिवनकै जोडी होस भन्ने चाहन्छन । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Posted byadmin March 19, 2021 Posted inrochak
काठमाडौंमा आज प’क्रा’उ परेका यी दुई युवती महिला, जसले पुरुषलाइ होटेलमा लगेर यस्तो सम्म गर्थे
चर्चित लोक गायिका कल्पना दाहाललाई चन्द्र शर्माले नेपाल टेलिभजनको स्टेजमै यसरी गरे बेइजत